Midira amin'ny serivisy amerikana noho ny Unlocator | Vaovao IPhone
Vao tsy ela akory izay no nahatongavan'i Netflix tany Espana, saingy mbola betsaka ny serivisy tsy anananay eto amin'ny firenentsika, na azonao vakiana aminay avy amin'ny firenena hafa izay tsy misy Netflix akory. Na dia manana azy io aza ianao eto dia voafetra ihany ny katalaoginy raha oharina amin'ny misy any amin'ny firenen-kafa toa an'i Etazonia. Ahoana ny fahafahanao miditra amin'ny serivisy voafetra ara-jeografika amin'ny faritra sasany? Ary afaka mankafy ny katalaogy misy amin'ny firenena hafa? Unlocator dia serivisy VPN mamela azy io ary tena mora ny mametraka azy amin'ny fitaovanao.Unlocator dia mahavita manatsotra izay mandraka ankehitriny dia ny aretin'andoha. Raha vao voasoratra anarana amin'ny serivisy dia mila anao fotsiny ampidiro ny DNS amin'ny fikirakirana ny fitaovanao ary hiasa amin'ny toerana vaovao izay namboarinao izy. Ny fahazoana ny katalaogin'i Netflix any Etazonia dia tsotra toy ny miditra isa maromaro ao amin'ny sehatry ny tamba-jotra amin'ny Apple TV na iPhone-nao. Te hanamora kokoa azy ve ianao? Ataovy ny fanahafana amin'ny haavon'ny router anao ary amin'izay ny fitaovana mifandraika amin'ny tambajotra WiFi anao dia hanana ny VPN mavitrika ary tsy mila manamboatra azy ireo tsirairay ianao.
Ny zavatra tsara indrindra momba ny Unlocator, ankoatry ny fampiasana mora dia izany tsy misy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana mihitsy. Ny fampiasana VPN dia tsy tokony hampihena ny fifandraisanao ary tsy ho afaka mankafy ny atiny HD amin'ny kalitao mendrika ianao. Raha ny momba an'i Netflix, ary rehefa avy nampiasa azy io nandritra ny andro vitsivitsy tamin'ny iPhone sy Apple TV-ko, ny atiny dia nojerena tamin'ny kalitaon'ny HD toy ny hoe niditra mivantana tamin'ny tambajotranoko nefa tsy nampiasa VPN.
Manolotra safidy "mandroso" bebe kokoa ihany koa ny serivisy, toy ny fahafaha-mampiasa VPN marani-tsaina amin'ireo toerana izay tsy ahafahanao manova VPN, toy ny tambajotram-bahoaka na rehefa mampiasa ny fifandraisana data-n'ny finday avo lenta ianao. Raha heverinao fa mety mahaliana anao ny Unlocator dia tsy manana fialan-tsiny ianao raha tsy mampiasa azy satria manolotra herinandro fidirana maimaim-poana nefa tsy mila manampy fomba fandoavambola, misoratra anarana fotsiny. Afaka miditra amin'ny Ity rohy ity amin'ny tranokalanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Midira amin'ny serivisy amerikana noho ny Unlocator
Namboariko tsara, ary ny pejy unlocator dia manondro jiro maitso ao amin'ireo faritra misy azy ary rehefa manandrana mijery fantsona iray aho dia mitarika ahy amin'ny fandoavana ny fantsona, ohatra hoe fox. Tsy haiko izay momba ny baomba rehetra.
Valiny tamin'i José Ángel
Mazava ho azy fa ny fantsona tsy maintsy aloanao amin'izany. Ity serivisy ity dia ahafahanao miditra amin'izy ireo amin'ny toerana izay tsy ahafahana manao izany, fa tsy ny kaonty fanapahana.
Iza no miresaka momba ny kaonty hacking? Lazao fotsiny, mazava, fa miditra amin'ny sary famantarana ireo fantsona ianao: satria amin'ny tsy fahalalako dia nino aho fa misokatra ireo fantsona ireo, toy ny any Espana ihany. Ary Andriamatoa Padilla, miresaka amiko izy, toy ny olona te hangalatra kaonty: raha ara-dalàna ianao dia aza raisina ho tsy ara-dalàna.
Tsy haiko ny mampiasa azy io amin'ny fampidinana pokemon go. Hita fa navadika ny VPN ary ny baolina rehetra fa tsy haiko ny mampiasa azy
Hevitra IPhone 7 tsy misy bokotra an-trano mihazakazaka iOS 10
VLC ho an'ny Apple TV dia efa andrana amin'ny fitsapana ny beta